News – Page2– King Of Future
17 Comments	/ News / By codexmyanmar
Juneလ(11)ရက် Thursday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(12:30)အချိန်တွင် United States Federal Reserve Interest Rate Decision သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Juneလ(11)ရက် Thursday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(12:30)အချိန်တွင် United States Federal Reserve (Fed) Economic Projections သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Juneလ(11)ရက် Thursday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(12:30)အချိန်တွင် United States Federal Reserve (Fed) Statement သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Juneလ(11)ရက် Thursday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(1:00)အချိန်တွင် United States Federal Reserve (Fed) Press Conference သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ___________________________________________ Dataထွက်ရှိသည့်အခါ အထက်ပါငွေကြေးအတွဲများ လှုပ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ Traders များအကျိုးအမြတ် ရကြပါစေ။
10 Comments	/ News / By codexmyanmar
?? Juneလ(10)ရက် Wednesday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(7:00)အချိန်တွင် Mayလအတွက် United States Core Consumer Price Index (CPI) MoM သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Juneလ(10)ရက် Wednesday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(9:00)အချိန်တွင် United States Crude Oil Inventories သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ _____________________________________________ ? Dataထွက်ရှိသည့်အခါ အထက်ပါငွေကြေးအတွဲများ လှုပ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ ❤️❤️❤️ Traders များအကျိုးအမြတ် ရကြပါစေ။
?? Juneလ(9)ရက် Tuesday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(8:30)အချိန်တွင် Aprilလအတွက် United States JOLTs Job Openings သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ _____________________________________________ ? Dataထွက်ရှိသည့်အခါ အထက်ပါငွေကြေးအတွဲများ လှုပ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ ❤️❤️❤️ Traders များအကျိုးအမြတ် ရကြပါစေ။
ဥက္ကဌ Mr.Lee သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း Samsung Electronics ရဲ့ အနာဂတ်အလားအလာ
8 Comments	/ News / By codexmyanmar
Samsung Electronics Co.Ltd၏ ဥက္ကဌ Lee Kun-Hee သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အစုရှယ်ယာ ရောင်းဝယ်ရေး မျှော်လင့်ချက်များ ပြန်လည်ရှင်သန်လာခဲ့သည်။တနင်္လာနေ့က Samsung Electronics (OTC:SSNLF) နှင့် တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများတွင် အစုရှယ်ယာများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ဥက္ကဌ Lee Kun-Hee သေဆုံးမှုကြောင့် မြင့်မားသော အမြတ်အစွန်းများ နှင့် ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော ပြန်လည်ဖွဲစည်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာနိုင်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်သူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ လေ့လာသုံးသပ်သူများက Mr.Lee မိသားစု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားရန်နှင့် စာရင်းပိုင် အစုရှယ်ယာများအတွက် သုည ဒသမ တစ်ဆယ် ထရီလီယံ ($ 8.9 Billions) ခန့် ခန့်မှန်းထားသည့် အခွန်ပေးဆောင်ရမည့် ပမာဏမှာ အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရန် အတွက် အရေးကြီးသော အခွင့်အလမ်း ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု …
ဥက္ကဌ Mr.Lee သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း Samsung Electronics ရဲ့ အနာဂတ်အလားအလာ Read More »
5 Comments	/ News / By codexmyanmar
Octoberလ(26)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် (3:30)အချိန်တွင် Octoberလအတွက် German IFO Business Climate Index သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Octoberလ(26)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် ည (8:00)အချိန်တွင် Septemberလအတွက် New Home Sales သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ___________________________________ Dataထွက်ရှိသည့်အခါ အထက်ပါငွေကြေးအတွဲများ လှုပ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ Traders များအကျိုးအမြတ် ရကြပါစေ။
This Week Important Data ??? ??????????
4 Comments	/ News / By codexmyanmar
Octoberလ(26)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် (3:30)အချိန်တွင် Octoberလအတွက် German IFO Business Climate Index သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Octoberလ(26)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် ည (8:00)အချိန်တွင် Septemberလအတွက် New Home Sales သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ___________________________________ Octoberလ(27)ရက် Tuesday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(7:00)အချိန်တွင် Septemberလအတွက် Core Durable Goods Order (MoM) သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Octoberလ(27)ရက် Tuesday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(7:00)အချိန်တွင် Octoberလအတွက် CB Consumer Confidence သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ___________________________________ Octoberလ(28)ရက် Wednesday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည်(12:30)အချိန်တွင် CPI (QoQ) (Q3) သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Octoberလ(28)ရက် Wednesday မြန်မာစံတော်ချိန် …
This Week Important Data ??? ?????????? Read More »
13 Comments	/ News / By codexmyanmar
?? Juneလ(8)ရက် Australia-Queen’s Birthday ?? Juneလ(8)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် မနက်(6:20)အချိန်တွင် Japan Gross Domestic Product (GDP) QoQ သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ _____________________________________________ ? Dataထွက်ရှိသည့်အခါ အထက်ပါငွေကြေးအတွဲများ လှုပ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ ❤️❤️❤️ Traders များအကျိုးအမြတ် ရကြပါစေ။
?? Juneလ(8)ရက် Australia-Queen’s Birthday ?? Juneလ(8)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် မနက်(6:20)အချိန်တွင် Japan Gross Domestic Product (GDP) QoQ သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ _____________________________________________ ?? Juneလ(9)ရက် Tuesday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(8:30)အချိန်တွင် Aprilလအတွက် United States JOLTs Job Openings သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ _____________________________________________ ?? Juneလ(10)ရက် Wednesday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(7:00)အချိန်တွင် Mayလအတွက် United States Core Consumer Price Index (CPI) MoM သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Juneလ(10)ရက် Wednesday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(9:00)အချိန်တွင် United States Crude Oil Inventories သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Juneလ(11)ရက် Thursday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(12:30)အချိန်တွင် …